နေပြည်တော် ဘောလုံးအသင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၀; ၁၁ နှစ် အကြာက (၂၀၁၀)
နေပြည်တော် ဘောလုံးအသင်းသည် မြန်မာဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်တွင် တည်ရှိသည်။အိမ်ကွင်းမှာ ပေါင်းလောင်း အားကစားကွင်းအား အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ အသင်းပိုင်ရှင်မှာ ထင်ရှားသော စီးပွားရေးသမားဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းဖြစ်သည်။ကလပ်အသင်းအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်တွင် ဒုတိယရရှိခဲ့သည်။
နေပြည်တော် F.C. ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အပျော်တမ်းကလပ်(ACE FC) အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးလိဂ်ဖြစ်သော မြန်မာလိဂ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ The အသင်း၏ပထမဆုံးမန်နေဂျာမှာ ဦးဇော်ဝင်းဖြစ်ပြီး နည်းပြမှာ ဦးဆန်းလွင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းက ACE FC (ယခု နေပြည်တော်ဘောလုံးအသင်း) ဘောလုံးအသင်းအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကလပ်အသင်းအဖြစ် မြန်မာလိဂ်မှ ပြောင်းလဲထားသော မြန်မာ နေရှင်နယ် လိဂ်တွင် ကစားရန်အတွက် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၂ AFC ဖလားတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း
၂.၁ AFC ဖလား အုပ်စု (H) ရပ်တည်မှု
၄ ကစားသမားများ (၂၀၁၅)
Nay Pyi Tawနေပြည်တော် FC ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသင်းတစ်သင်းအဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်က ရန်ကုန်မြို့တွင် အခြေပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ပေါင်းလောင်းအားကစားကွင်းအား ၁၅,၀၀၀ ဆန့် အားကစားကွင်းအဖြစ် အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး အိမ်ကွင်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
Nay Pyi Taw FCနေပြည်တော် ဘောလုံးအသင်းသည် ဇွဲကပင် ယူနိုက်တက်အသင်းအား ၆ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သော ဘောလုံးပွဲ(၂၀၁၀ ဧပြီ ၅)သည် အသင်းအတွက် ပထမ အကောင်းဆုံးအနိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပွဲတွင် ပထမဆုံး Hat-trick ဂိုးအဖြစ် Aruna က သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်သည် အသင်းအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံး ကျော်ဖြတ်နိုင်သော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ အေအက်ဖ်စီဖလားသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သည်။.
AFC ဖလားတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၄: နေပြည်တော်ဘောလုံးအသင်းသည် ၂၀၁၄ အေအက်ဖ်စီဖလားသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး အုပ်စု H တွင် ကျရောက်ခဲ့ရာ အဆိုပါအုပ်စုတွင် ဟောင်ကောင်မှ Kitchee FC ၊စင်ကာပူမှ Tampines Rovers FC နှင့် အိန္ဒိယမှ Pune FC တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲသည် နေပြည်တော်ဘောလုံးအသင်း၏ ပထမဆုံး အာရှအဆင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်အသင်းသည် အုပ်စုအဆင့်ကျော်လွန်ပြီး ၁၆ သင်းအဆင့်တွင် ဗီယက်နမ်အသင်းဖြစ်သော Hanoi T&T အသင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
AFC ဖလား အုပ်စု (H) ရပ်တည်မှု[ပြင်ဆင်ရန်]
၂–၀ ၂–၂ ၄–၀
၀–၅ ၀–၁ ၃–၁
၂၀၁၀၊၂၀၁၁ FBT Hotel Ace
၂၀၁၂ Nike KTM
၂၀၁၃ Warriors U'JAZZ
၂၀၁၄ Warriors -
2 DF ရဲဇော်ထက်အောင်
3 DF Happiness
4 DF ချမ်းချမ်း
5 DF ဖြိုးမောင်မောင်ဆွေ
6 DF နီမောင်မောင်အောင်
7 DF နေဇော်အောင်
8 MF ဘိုဘိုနိုင်
9 FW Daniel Akuffo
10 MF ခိုင်ထူး
12 MF အောင်ကိုကိုဦး
14 FW ကျော်ဌေးဦး
15 MF စည်သူသန်း
16 MF တင်ဇော်မိုး
17 MF အောင်မျိုးသက်
18 GK ဟိန်းကျော်သူ
19 DF ရန်ကျော်ထွေး
20 MF စိုးသူရိန်ထွန်း
22 GK နိုင်ရာဇာထွန်း
23 DF အောင်မျိုးခန့်
25 FW ဝိုင်းချစ်အောင်
27 FW သန့်ဇော်ဟိန်း
28 DF ရဲလင်းနိုင်
29 GK စောအိမ်းထူး
30 MF Keita Boubacar
32 MF Kentaro
33 GK စိုးမင်းထိုက်
March/April 2013 မျိုးလှိုင်ဝင်း နေပြည်တော် Jung Yoon-sik နေပြည်တော်
၂၀၁၀ Aruna ဇွဲကပင်ယူနိုက်တက်
၆–၀ ၅ မေ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
၂၀၁၃ မင်းမင်းထွန်း ရခိုင်ယူနိုက်တက်
၄–၂ ၁၀ မေ ၂၀၁၃
၂၀၁၁ ဇော်လင်း MFF Young Player of the Year
၂၀၁၄ အောင်ကျော်နိုင် MFF Young Player of the Year
၂၀၁၀ ဒဿမ ၂၀ ၃ ၃ ၁၄ ၂၅ ၃၆ ၁၂ ကွာတားဖိုင်နယ် -
၂၀၁၁ ဆဋ္ဌမ ၂၂ ၈ ၆ ၈ ၃၃ ၂၈ ၃၀ Runners-up -
၂၀၁၂ သတ္တမ ၂၆ ၁၂ ၆ ၈ ၃၈ ၂၅ ၄၂ ကွာတားဖိုင်နယ် -
၂၀၁၃ ဒုတိယ ၂၂ ၁၂ ၆ ၄ ၃၆ ၂၁ ၄၂ အုပ်စုအဆင့် -
၂၀၁၄ ဆဋ္ဌမ ၂၁ ၁၀ ၂ ၉ ၃၃ ၃၁ ၃၂ Runner Up ၁၆ သင်းအဆင့်
၂၀၁၅ ဒွါဒဿမ ၂၂ ၄ ၅ ၁၃ ၂၂ ၄၂ ၁၇ 2th round -
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နေပြည်တော်_ဘောလုံးအသင်း&oldid=416152" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၇:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။